Tourism na Australia - Ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee | Njem zuru oke
Australia bụ obodo dị na Oceania nke jikọtara ma anwansi nke nkuku ya n'ụdị osimiri, yana ọdịbendị dịgasị iche nke kwesịrị ịgagharị. Ya mere, ndị njem nleta dị iche iche dị oke obosara. Ozugbo anyị kwụsịrị n’ala ya, anyị ga-agarịrị Sydney Opera House, ọrụ nka niile a kara aka maka ngosi. Ọzọkwa na Sydney anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri ọdụ ụgbọ mmiri, yana ọdụ ụgbọ mmiri ya, Katidral Meri na ụsọ mmiri ya.
Ọ bụrụ na anyị agaa Melbourne, anyị agaghị echefu ọba akwụkwọ ya, yana Ogige Botanical ma ọ bụ ahịa Queen Victoria. Na mgbakwunye na abụọ akpọrọ, enwere obodo ndị ọzọ anyị na-agaghị echezọ na njem anyị, dịka Brisbane, Adelaide, Perth ma ọ bụ Gold Coast, tinyere ndị ọzọ.
N'ezie, na mgbakwunye na obodo na ọmarịcha ha niile, anyị enweghị ike ichefu mpaghara ogige na Australia na-arụ ọrụ nke ọma. Offọdụ ndị kacha mara amara bụ Nambung National Park ma ọ bụ Purnululu na Karijini. Mana ma eleghị anya, otu n’ime ihe ndị a kacha ekwu banyere ya bụ mgbe niile Ogige Ndịozi iri na abụọ ahụ. Na mgbakwunye mmiri mmiri mmiri nke Wallaman ma ọ bụ agwaetiti ya na Barrier Reef. Ebe ka ichoro ịmalite uzo gi?
Were na ọdọ mmiri pink, Ọdọ Mmiri Hillier
por Isabel eme Ọnwa 4 .
Etwa mbara ala bụ ebe na-adọrọ adọrọ nke na-anaghị akwụsị ịtụ anyị n'anya. You maara na Australia nwere ọdọ nke ...
Ọrụ ugbo na Australia
por maruuzen eme Ọnwa 4 .
Otu n'ime mba kachasị mkpa na Oceania bụ Australia, ala dị anya nke na-egosi taa dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nweere onwe ya ...
por Luis Martinez eme Ọnwa 6 .
Enweghi ọtụtụ ihe sayensị na teknụzụ Australia dị ka ndị achọpụtara na mba ndị ọzọ nke ụwa. Ihe kpatara ya di mfe: ...
Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu?
Kedu ụlọ ọrụ Australia kachasị ukwuu? Ajụjụ a adịkarịghị na mpụga usoro akụ na ụba pụrụ iche. Na…
por Isabel eme Ọnwa 6 .
Ọ bụrụ n 'ezumike ọzọ gị ịchọrọ ịga njem Australia ma ọ bụ ịchọrọ ịga ọmụmụ na mba a, ...
por Luis Martinez eme Ọnwa 7 .
Gburugburu Ebe Ọstrelia dị iche iche ma nwee nnukwu ọgaranya. Buru n'uche na anyị na-ekwu maka nnukwu obodo ...
Ihe ọ drinksụ drinksụ Australia
por Daniel eme Ọnwa 8 .
Kwa afọ ọtụtụ puku ndị njem nleta na-eleta Australia iji chọpụta agwaetiti-kọntinent ma nwee obi ụtọ ụzọ ndụ Australia. Na na…
Red Dog, nkịta ndị mepere emepe nke akụkọ akụkọ
por Daniel eme Afọ 1 .
Nkịta Uhie ghọrọ otu n'ime nkịta ndị a kacha mara amara n'ụwa n'ihi ihe nkiri ahụ «Red Dog, ...
Anụmanụ ndị Australia nwere pụrụ iche
Otu n'ime ọtụtụ ihe mere Australia jiri bụrụ obodo na-adọrọ adọrọ bụ oke akụ na ụba ya. Anụmanụ ...
Ndị ama ama ama ama ama nke Australia
por Luis Martinez eme Afọ 1 .
Ndị Australia kachasị egwu egwuregwu tennis emeela obodo ha nnukwu ike egwuregwu raketị. Na-enweghị…
Na-agbadokwa osisi aki oyibo, mmiri na-acha anụnụ anụnụ, na ájá ọlaedo. Foto zuru oke nke anyị na-ese n'echiche njem anyị na nke nwere ike ịghọ ...
Nlegharị anya na Australia
Osimiri 8 dị n’ụwa na-enwu n’abalị
Best Australian Rock Bands
Australia na nsogbu nke ejiji ejiji